निवेदन दिनुस्, सित्तैं विवाह गर्नुस् अनि भोज पनि खानुस्! - Everest Dainik - News from Nepal
निवेदन दिनुस्, सित्तैं विवाह गर्नुस् अनि भोज पनि खानुस्!
काठमाडौंः विहानै फेसबुकमा एउटा अनौठो सूचना आयो । सूचना थियो सुनसरीको कोशी गाँउपालिकाको । सूचनामा लेखिएको थियो भूमिहीन, सुकुम्बासी र धेरै छोरीहरू भएर विबाह गर्न नसक्ने परिवारलाई गाउँपालिका आफैले निःशुल्क समूहिक विबाह गरीदिने ।
खास कुरो के रहेछ भनेर बुझ्दा त्यस गाँउपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मै आफैं बिबाह गर्न नसक्ने विपन्न परिवारका जोडीलाई सामुहिक बिबाह गरिदिने निर्णय गरेको रहेछ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयु्व अन्सारीले टेलिफोन कुराकानीमा बताए, ‘मान्छेले जीवनमा एक पटक बिबाह गर्छ तर सबैले राम्रोसँग विबाह गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई लक्षित गरेर गाँउपालिकाले नसक्ने जोडीको बिबाह गर्न लागेका हौं’ अध्यक्ष अन्सारीले भने ।
याे पनि पढ्नुस चौधरी ग्रुपको पशुपति बिस्कुट उद्योगमा भीषण आगलागी
गाउँपालिकाले यो आर्थिक बर्षमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएर सूचना समेत जारी गरेको छ । गाउँपालिकाले सूचनामा मङ्सिर १७ गतेभित्र नजिकैको बडा कार्यालयमा पुगेर बिबाहको लागि निवेदन दिन गाँउपालिकाबासीमा अनुरोध गरेको छ ।
उनहरूले निवेदन दिएको आधारमा गाँउपालिकाले लगनको दिन पारेर सामुहिक बिबाह गरिदिने योजना अघि सारेको छ । ‘उहाँहरूको संस्कार र परम्परा अनुसार गाउँपालिकाले ठाँउ तोकेर बिबाह गरिदिन लागेका हौ’ अध्यक्ष अन्सारीले भने ।
याे पनि पढ्नुस चाणक्य नीति भन्छः यस्ता महिलासँग विवाह गर्दा हुन्छ हानी
गाँउपालिकाले उमेर पुगेका र परिवारको स्वीकृत भएका जोडीले निवेदन दिन सक्ने बताएको छ । गाउँपालिकाले बिबाहमा सहभागी हुनेलाई भोजको व्यवस्थासँगै बेहुलाबेहुलीलाई लत्ताकपडाको व्यवस्थापन गरिदिने र आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसार गाउँपालिकाले बिबाह गरिदिने गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
रातको समयमा बिबाह गर्दा मंङ्सिर महिनामा जाडो बढ्ने भएकाले यो समयमा कमै मात्र बिबाह हुने गरेकौ छ । मङ्सिर महिनामा बिबाहको लगन धेरै हुने भएकाले गाउँपालिकाले बिबाहका सूचना जारी गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुस विवाह खर्च कटाएर रंगशाला निर्माणलाई एक लाख सहयोग
मङ्सिरमा जाडो ले कम विवाह हुन्छ वैशाखमा हुने बिबाहमा धेरै निवेदन आउने आसा लिएका छौ’गाउँपालिकाअध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
गाउँपालिकाले एक बर्षअघि तथ्यांक संकलन गरेकोमा भूमिहीन, सुकुम्बासी र धेरै छोरी भएका परिवारले बिबाह गराउन समस्या भोगिरहेकाले यो निर्णय लिएको हो ।
ट्याग्स: कोशी गाँउपालिका, विवाह, सुनसरी